पशुपतिनाथमा राष्ट्रपति पुग्दा नागाबाबालाई गु’प्ताङ्ग छोप्न निर्देशन- ५ लाखको मा’स्क वितरण ! – Life Nepali
पशुपतिनाथमा राष्ट्रपति पुग्दा नागाबाबालाई गु’प्ताङ्ग छोप्न निर्देशन- ५ लाखको मा’स्क वितरण !
काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ना’गा बा’बाहरुलाई रा’ष्ट्रपति वि’द्यादेवी भ’ण्डारीको प’शुपति द’र्शन का’र्यक्रमभर कुनै न कुनै ब’स्त्र लगाएर आफ्नो गु’प्ताङ्ग छो’प्न नि’र्देशन दिएको थियो। कोषको निर्देशनअनुसार नै मन्दिर परिसरमा रहेका बा’बाहरुले राष्ट्रपतिको र उपराष्ट्रपतिको सवारी अवधिभर क’पडाले गु’प्ताङ्ग छो’पेका थिए। यसपटकको शि’वरात्रिमा जो’गी, स’न्यासीहरुको सं’ख्यामा ऐतिहा’सिकरु’पमै क’मी आएको थियो। विगत बर्षहरुमा ४ देखि ५ हजारसम्म हुने गरेकोमा यसपटक जम्मा १५ सयको हारा’हारीमा मात्र साधु सन्त र जोगी र बा’बाहरु देखिएका थिए।
दिनभर स’क्रिय प्रहरी रा’तपरेपछि भने सु’स्तायो : शिवरात्रिको कार्यक्रम अवधिभरका लागि नेपाल प्रहरी र स’शस्त्र प्रहरीका गरी झ’ण्डै ५ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। विहानैदेखि नि’कै चु’स्त अ’वस्थामा राखिएको सु’रक्षा व्य’बस्था राष्ट्रपति भ’ण्डारीको पूजाआजापछि अ’र्थात् सांझ ६ बजेपछि भने अलि क’मजोर भएको थि’यो । उता, सा’इतअ’नुसार भने प’शुपतिनाथको चार प्रहरको पूजा सांझ ६ बजे, राति ९ बजो, राति १२ बजे र शनिवार विहान ३ बजे गरिएको थियो । गांजा नि’यन्त्रणमा भने प्रहरीले दि’नभर नि’कै मे’हनत गर्नु परेको थियो।
फूलैफूलले ढ’कम’क्क पशुपति :- यसपटकको शि’वरात्रिमा पशुपतिना’थमा फूलको स’जावट ऐतिहासिक दे’खिएको थियो । भारतका ए’कजना व्य’पारीले २ करोड रु’पैंया निजी खर्च गरेर वि’भिन्न देशबाट फू’लहरु म’गाई पशुपतिको साजस’ज्जा गराएका थिए । कोरोना भा’इरलको ड’रमा मा’स्क वितरण :- पशुपति क्षेत्र कोषले मौसमी रु’गाखोकी र छिमेकी देश चीनमा फैलिएको को’रोना भा’इरसको ख’तरालाई मू’ल्यांकन गर्दै यसपटक दर्शनार्थीहरुका लागि मा’स्कको व्यब’स्था गरेको थियो । कोष स्रोतका अनुसार, करिब ५ लाख रुपैंया बराबरका मा’स्क किनेर साधु स’न्त र दर्शनार्थीहरुलाई वितरण गरिएको थियो ।
राज्यकोषबाट ७० लाख खर्च :- महाशिवरात्रि पर्वका लागि राज्यकोषबाट ७० लाख रकम छुट्याइएकोमा सबै रकम खर्च भएको बताइएको छ । ना’ङ्गा बा’बा र अन्य सा’धु स’न्तहरुलाई द’क्षिणा दिएर विदा गर्न वां’की नै रहेकोले केही रकम थप खर्च हुनसक्ने बताइएको छ । फागुन ११ गते आइतवार एकपाउ पे’डा, एक कतारा दही र नागा बा’बाको स्तरअनुसारको दक्षिणा दिइने परम्परा छ ।
छानिएका केही जोगीलाई वाघको छाला दिने पुरानो चलन भने केही बर्षअघिदेखि नै हटिसकेको छ । रातिको स’मयका लागि ला’इटिङ्ग(उज्यालो) को व्य’बस्थामा यसपटक विगतमा भन्दा कमजोरी देखिएको कोषका एक क’र्मचारीले बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा शिवरात्रि मूल व्य’बस्थापन समिति गठन भएको थियो।
Previous ह्वात्तै ब’ढयो सुनको मूल्य अहिले सम्मकै उच्च भाउ – तोलामा कति पुग्यो ?